किन घट्यो मतदान? :: मनोज सत्याल :: Setopati
किन घट्यो मतदान?
स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कम मतदान भएको छ।
आफ्नो प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार ६६ प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आज सम्पन्न दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा ६७ प्रतिशत मत खसेको छ। पहिलो चरणमा ६५ प्रतिशत मतदान भएको थियो।
जबकी स्थानीय तहका तिनै चरणका निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मतदान भएको थियो। स्थानीय तहको पहिलो चरणमा ७१ प्रतिशत, दोश्रो चरणमा ७० प्रतिशत र तेश्रो चरणमा ७७ प्रतिशत मत खसेको थियो।
त्यसअघि २०७० सालमा भएको निर्वाचनमा ७८.३४ प्रतिशत मतदान भएको थियो। २०७० सालबाट फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्र लागू भएको हो।
यसरी तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा ८ प्रतिशतले कम मत खसेको छ।
त्यस्तै २०७० सालको दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनसँगको तुलनामा यसपटक १२ प्रतिशत कम मत खसेको छ। पूर्व निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतिले धेरै नेपाली विदेशमा रहेकाले यहाँ कम मत खसेको बताए।
'मतदानका लागि लाइनमा बसेकामा पुरुष भन्दा महिला धेरै थिए,' बिहिबार काठमाडौँबाट स्याङ्जाको वालिङसम्म मतदान स्थलको अवलोकन गरेका निलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘धेरै पुरुषहरु विदेशमा रहँदा मतदान कम भएको हो।
२०७० सालबाट २०७४ सम्म आउँदा झण्डै २० लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन्। मतदाता संख्या थपिँदा पनि मतदान भने कम भएको छ। उप्रेती २०७० मा ताजा नामावली संकलन गरिएकाले धेरै मत खसेको अहिले ती मतदाता देश बाहिर भएकाले मत कम खसेको बताउँछन्।
उनले जिल्लाबाट बाहिर काम गर्न जाने पुरुषहरु एक दिन मात्र समय हुँदा मतदानका लागि नफर्किएले पनि मतदान घटेको बताए।
पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बाली थन्क्याउने समयका कारण मतदान स्थल भन्दा मतदाता खेतमा गएको बताउँछन्।
'अन्य समयमा निर्वाचन भएको भए ७० देखि ७२ पुग्न सक्थ्यो,' पोखरेलले भने, 'दिनभरी काम गरेर मतदानमा आउन पनि गाह्रो छ।' उनी केही चिसो ठाउँमा मत कम खसेको बताउँछन्।
उप्रेतीले 'टुरिस्ट उम्मेद्वार' का कारण पनि मतदान कम भएको बताए।
'उम्मेद्वारसँग मतदाताको सम्बन्ध नहुँदा भोट हाल्न जाँदैनन्,' उप्रेतीले भन्छन् , 'यो पछिल्ला बम पड्कने घटनाले श्रृजन गरेको त्रास पनि सहायक कारण देखिन्छ।'
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने मतदान कम भएको स्वीकार गरेनन्।
'६७ प्रतिशत मतदान भनेको ज्यादै इम्प्रेसिभ मतदान हो,' ढकालले भने, 'हाम्रो निर्वाचनको इतिहास हेर्नुभयो भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतदान यसैको हाराहारीमा छ।'
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनसँग प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गरे। 'स्थानीय परिवेशको निर्वाचन र यो निर्वाचन फरक फरक हो,' ढकालले भने।
ढकालको तर्कसँगै उप्रेती पनि सहमत छन्। स्थानीय तहमा व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि भोट हाल्न मतदाता फर्कने भएपनि अहिले ठूलो निर्वाचन क्षेत्र र मतदाताको उम्मेद्वारसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धको अभावमा मतदाता भोट हाल्न नगएको उप्रेती बताउँछन्। 'काका वा दिदी उम्मेद्वार हुँदा मत हाल्न गएकाहरु अहिले ठूलो निर्वाचन क्षेत्र भएका बेला गएको देखिदैँन,' उप्रेती भन्छन्।
पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेल पनि ६७ प्रतिशत राम्रो मत भएको बताउँछन्। 'विकासशील मुलुकमा ४० प्रतिशतलाई राम्रो मानिन्छ,' पोखरेल भन्छन्, 'स्थानीय निर्वाचनसँग तुलना नगर्ने हो भने यो राम्रो मतदान हो।'
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर २१, २०७४, ०८:११:२८